LAST UPDATED: 2019-06-19, 21:01
•I-CHILD and Family Welfare Society icela ukufuniswa uDuma Zenzile noNgcobo Mzolozi abangabazali baka NoziphoDuma, u-Ayabonga Duma noSandile Ngcobo. Kubikwe ukuthi labazali bahlala e-Smero. Onolwazi sicela axhumane nosonhlalakahle uMnuz Nathi Shezi enombolweni ethi: 033 342 8971.
•Inhlangano i-CMD icela ukufuniswa ubaba nomama wamawele uThobile noThobeka Ndlovu abazalwa ngomhla ka-12 June, 2005. Igama likamama wabo alaziwa, elikababa uSonthi Zuma bobabili kusolakala ukuthi babehlala KwaNxamalala (eBhobhonono). Uma kukhona onolwazi angaxhumana noSonhlakahle uBongiwe Zondi enombolweni ethi: 033 342 0141.
•Sicelwa ukufuniswa ubaba ka-Asanda Ntombela ohlala eMbali unit 2. Onolwazi sicela axhumane noSonhlalakahle uMnuz K Msomi enombolweni ethi: 033 392 8600.
•I-Child and Family Welfare icela ukufuniswa ubaba kaSenamile Majozi ozalwa uThuliswa Princess Majozi ongasekho emhlabeni. Onolwazi sicela axhumane noSonhlalakahle uNobuhle Madlala enombolweni ethi:033 342 8971.
•I-Child and Family Welfare icela ukufuniswa ubaba kaLonwabo Dlamini ozalwa uNoluthando Dlamini ongasekho emhlabeni. Onolwazi sicela axhumane noSonhlalakahle uNobuhle Madlala enombolweni ethi:033 342 8971.
•I-Child and Family Welfare icela ukufuniswa ubaba kaSetleko Khotsofalang ozalwa uKhesa Nombuso ongasekho emhlabeni. Onolwazi sicela axhumane noSonhlalakahle uNobuhle Madlala enombolweni ethi:033- 342 8971.
•I-Child and Family Welfare icela ukufuniswa abazali baSimphiwe Mavimbela noNonhlanhla Mavibela, umama wabo uNtombizodwa Mavimbela ongaziwa ukuthi ukuphi. Onolwazi sicela axhumane noSonhlalakahle uNobuhle Madlala enombolweni ethi: 033 342 8971.
•I-Child and Family Welfare icela ukufuniswa ubaba kaShange Amanda ozalwa uShange Ntombifuthi ongasekho emhlabeni. Onolwazi sicela axhumane noSonhlalakahle uNobuhle Madlala ku: 033 342 8971.